Singena esigabeni esisha sokuma komhlaba: I-Anthropocene | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi ku-geology asilinganiswa ngeminyaka, silinganiswa ngezigidi zeminyaka. Lawa abizwa ngama-eon futhi izikhathi ezaziwa kakhulu ze-geological yiPaleocene, iHolocene, njll. Kepha manje, njengamanje, noma ngubani owazalwa ngo-1950, uzozizwa emdala kakhulu ngoba baphila izikhathi ezimbili ezihlukene zokwakheka komhlaba.
Njengamanje, ngemuva kwesikhathi sokugcina seqhwa, singena eHolocene, kepha sinikezwe umthelela omkhulu abantu abanawo eMhlabeni, lingene ekhasini elisha ekhalendeni lokwakheka komhlaba, i-Anthropocene.
1 Ubufakazi be-anthropocene
2 Imisebenzi yethu iguqule umhlaba
3 Izidingo zokuqoka isigaba esisha sokuma komhlaba
Olunye lwezivivinyo olukhombisa ushintsho lweplanethi yethu luku ichweba lomfula iBilbao. Kungumugqa wamamitha ayisikhombisa wenzika eqoqwe ukwenziwa kwezimboni. Enye indlela yokutadisha ezikhathini zasendulo zomhlaba ukutadisha ukuqongelela kwezidumbu kuwo wonke umlando. Kanjalo, Lezi zinsalela zezimboni sezivele ziyingxenye yempilo yomhlaba.
Iqembu lososayensi ebeliphethe ekuthatheni isinqumo ngalokhu livumile ukusho ukuthi sidlulise iHolocene ukungena kwi-Anthropocene. Umkhondo wemisebenzi yabantu uzobekwa kuze kube phakade kuyo yonke iplanethi njengomugqa okhombayo kuhlaka oluzobonakala ezinkulungwaneni noma ezigidini zeminyaka kusukela manje emihumeni nasemadwaleni, okuyisithenjwa saphakade sososayensi bakusasa. Iqembu eliqokiwe lochwepheshe linqume lokho i-Anthropocene iqala ngo-1950 ngemfucumfucu enemisebe evela emabhomu e-athomu.
Imisebenzi yethu iguqule umhlaba
Ngemisebenzi yethu siguqule uMhlaba. Lesi yisikhathi lapho sikwazile ukuguqula umjikelezo wokuphila kweplanethi, sayikhipha ekuhlukeni kwayo kwemvelo. Imvelo eminingi, izindawo zokuhlala, izinhlobo zezilwane nezitshalo, amabhaktheriya nokunye kuyavumelana nezimo zethu, kunokuba kube okuphambene.
Uphawu oludala ukuqala kwale nkathi yokwakheka komhlaba yizinsalela ezinemisebe ye-plutonium, ngemuva kokuhlolwa okuningi kwamabhomu e-athomu okwenziwa maphakathi nekhulu lama-7. Ubungqimba bamamitha angaba ngu-XNUMX ukuphakama lapho bekhona Izinsalela ze-slag ezikhishwe ngamathambo wokuqhuma phakathi kuka-1902 no-1995 zingabonakala ogwini lwesamente lwaseTunelboca.
Izidingo zokuqoka isigaba esisha sokuma komhlaba
Ukuze kuchazwe ukuqala kwesigaba esisha sokwakheka komhlaba, kufanele kube nesiginali yokuthi, emhlabeni jikelele, ivumelanisa lonke ushintsho ezingeni leplanethi. Ekuqaleni, ongoti babecabanga unyaka we-1800 njengosuku lokuqala kwe-Anthropocene, nenguquko yezimboni. Kodwa-ke, yalahlwa ngoba unyawo lwayo alubi ngokulinganayo futhi ngasikhathi sinye kuzo zonke izinhlangothi zomhlaba.
Okubalulekile ngaleli cala akukhona ukuthi umuntu wenze uphawu lwakhe. Lokhu bekulokhu kwenziwa isikhathi eside, izinkulungwane zeminyaka ngisho. Ukhiye wokuqokwa kwesiteji esisha sokwakheka komhlaba ukuthi ushintsho lomjikelezo ekuziphatheni kweplanethi yonke. Lokhu kudalwa yi imisebenzi yethu yabantu, ukungcola kwethu, amapulasitiki ethu, ukukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa okushisayo, imfucuza yezimboni, ukuguqulwa kwemvelo, ukunyamalala okukhulu kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, i-acidification yolwandle ... Eziningi zalezi zinguquko zihlala isikhathi eside ngokwendawo, kanti ezinye azibuyiseki.
Kungakho lesi sinqumo sesayensi besanele ukuba sikhombe ukuqala kwe-Anthropocene njengesigaba esisha sokwakheka komhlaba lapho ophambili wezinguquko zemvelo nasemijikelezweni yoMhlaba kungumuntu. Ubufakazi obuphawula lesi sigaba se-Anthropocene buzohlala emhlabeni wethu kuze kube phakade.
Lokhu kudala izimpikiswano ezahlukahlukene ngokuhluleka kwabantu emphakathini wethu, ikakhulukazi lapho kufika ukuguquka kwesimo sezulu. Ngeke kwahlulelwa ukuthi iqiniso lokuthi ama-dinosaurs aphela ngabe lihle noma libi, kepha nokho besingekho lapho futhi sikude nalo, besiyimbangela yokuqothulwa kwabo. Kepha manje namuhla, sibhekene nezinguquko emhlabeni. Kungakho kuvela ukungabaza "ngokubaluleka" kwethu kule planethi. Ingabe siyisifo noma isifo kwezinye izinhlobo zezinto eziphilayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Singena esigabeni esisha sokuma komhlaba: I-Anthropocene
Ukuguquka kwesimo sezulu kunomthelela omkhulu kunalokho obekucatshangwa ngaphambili ezilwaneni